Mialohan’ny hanaovana haingon-tava dia ireto atao :
Diovina amin’ny “eau florale” toy ny “eau de rose” aloha ny tarehy. Lomana rano mahamay ny servieta iray dia apetraka eo ambonin’ny tarehy mandritra ny 10 minitra, sady miezaka maka aina no tsy miasa saina. Vita izay dia hosorana tantely 1 sotro ny tarehy manontolo mba ho mandina hatrany ifotony. Avela minitra vitsy vao kobanina amin’ny rano matimaty. Ho toy ny hodi-jazakely ny tarehinao avy eo.
Ity misy fomba faharoa izay hampamiramirana ny tarehy haingana be : maka tapotsin’atody. Asiana ranom-boasarimakirana kely dia kapohina hisavovona. Ahosotra amin’ny tarehy ary tazonina eo mandritra ny 20 minitra vao kobanina amin’ny rano mangatsiaka. Sady hadio tsara ny tarehy no hazava loko kokoa.
Hanome loko tsara ny tarehy koa ny misotro ranom-boankazo voaloboka isa-maraina, ilay vao nopotsehina fa tsy ilay efa voavaotra ara-indositrialy akory no. Hanampy anao koa ny hanosotra tambavy vita amin’ny dità amin’ny tarehy, atao toy ny “lotion”.
Manatsara ny fidiran’ny ôksizenina ao anatin’ny hoditra ny vitamin C sady manampy ny hoditra hiady amin’ny fahanterana aloha loatra. Aza misalasala, noho izany mihinana legioma sy voankazo be vitamina C, toy ny kiwi. Ankoatra izay dia zava-dehibe ho an’ny hoditra koa ny vitamina D.